Home / Foset Guide / Ayszọ ndị na - eduga n'ịhọrọ kichin kachasị mma
2020 / 11 / 19 nhazi ọkwaFoset Guide 4391 0
Họrọ ọkpọkọ kichin bụ ọrụ na-adọrọ mmasị ị nwere ike ịchọta ọtụtụ nhọrọ na-egosi ụdị, ịdịte aka ma dị egwu. N'aka nke ọzọ, ọ bụ ihe aghụghọ na ị nweghị ike ịhọrọ nke ọ bụla ma mebie ike.
Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ ga-enyere aka ị nweta kichin kichin kachasị mma dị ka eriri ọkpọkọ wowow:
Họrọ oke ziri ezi na elu
Mgbe ị na-ahọrọ ọkpọkọ kichin ọ dị mkpa ịtụle nha na elu iji nweta ndozi kwesịrị ekwesị. Obere obere nwere nnukwu elu na-enye mmiri mmiri na-enweghị isi. Ọzọkwa, ọ na-adabere nha bekee nke ị ga-etinye pipụ ahụ.
Etinyela ego gabiga oke
Na ahịa ị nwere ike ịchọta ọtụtụ nhọrọ dị ka matte ojii kichin ojii na ọtụtụ ndị ọzọ, mana etinyela ego nke ukwuu iji nweta otu. cheta na mgbe etinye ike na anwụ ngwa ngwa nke ihe a otutu. Ọ dị mkpa ịbụ onye maara ihe na imefu ego ahụ na ịhọrọ nhọrọ ndị na-esiteghị na mmefu ego, na-emejupụta mkpa ma na-enyekwa ụdị nkecha.
Idoda ala bụ nhọrọ ka mma
Dị ka ụdị ndị ọhụrụ, nhọrọ ọrụ dị n'ahịa na ọkpọkọ. Nwere ike nweta ndọtị ala na akụkụ sprayer nhọrọ mfe. Ugboro abụọ n'akụkụ ma ọ bụ otu akụkụ sprayer bụ ụdị ochie. Kama nke ahụ ịkwatu bụ ihe ọhụrụ ma maa mma ma na-enyere aka izere nkwụsị mmiri. Ọ na-enye ebe mgbatị na-adigide karịa mgbe ahụ n'akụkụ na-enyere gị aka izere nsogbu ahụ ogologo oge.
Họrọ otu njikwa
Ọtụtụ ndị mmadụ na-ewere ọkpọkọ ihu abụọ dị mma ma mara mma. Ha bụ ụdị ụdị eji eme ihe ọdịnala nke na-ewu ewu ogologo oge. Ma, otu njikwa ọkpọkọ bụ ezigbo mma na njikwa na awade kacha mma ukpụhọde maka mmiri larịị. Nwere ike mfe mix na-ekpo ọkụ na mmiri oyi na otu njikwa fosets na-enweta ihe dị irè mix. Ọ dị mfe ijikwa ma rụọ ọrụ ma e jiri ya tụnyere ọkpọkọ ihu abụọ.
Tụlee ụdị na ike
Ndị mmadụ na-etinye ego na ọkpọkọ site n'ịchọ ụdị, ọdịdị na echiche. Styledị ọkpọ mmiri abụghị ihe niile, enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-ekere òkè na nhọrọ dị ka nkwụsi ike, njikwa, ihe na ọnụahịa. ya mere, etinyela ego na kichin kichin site na ilele ụdị anya ahụ. Ga-eleba anya n'ime sinkholes, họrọ n'etiti ot na kwatuo nhọrọ ma lelee iru ma ọ bụ ịdị elu nke ọkpọkọ ahụ.
Lee anya na ngwụcha zuru oke
Site n’ịchọ ọkpọkọ kwesịrị ekwesị ọ dị mkpa ileba anya na njedebe nke ọkpọkọ ahụ. matte ojii na-adọta ala kichin foset anya nnukwu na ịrịọ na kichin ịke. Ọzọkwa, ị nwere ike ibubata ya na agba na ụdị kichin kichin gị. Ọ dị mkpa ịhọrọ njedebe zuru oke iji zere mmebi na nsị site na ọkpọkọ ahụ ogologo oge. Ma ọ bụ iji mee ka ọ dịgide adịgide ma jiri ya rụọ ọrụ ogologo oge.
Nke gara aga :: Kwụpụ site Ntuziaka Nzọụkwụ na Ndozi na Otu Esi Zụta Ego Ntanetị N'ịntanetị Osote: Complete Guide Nzọụkwụ Na Olee otú Iji Wụnye Towel Ring
2021 / 01 / 10 862
2021 / 01 / 10 633
2020 / 12 / 21 5084
2020 / 11 / 19 4007
2020 / 11 / 18 4289
2020 / 11 / 16 4275